Ny telefaona saka dia mandefa ny finday avo lenta finday avo lenta, Cat S31 ary Cat S41, amin'ny IFA 2017 | Androidsis
Jose Alfocea | | IFA, About us
Ny foara IFA 2017 izay atao any Berlin amin'izao fotoana izao dia manome tena be dia be, na amin'ny lafiny marika fanta-daza toa ny Samsung na LG, ary koa amin'ny lafiny hafa izay tsy dia be loatra amin'ny ankapobeny fa , na eo aza izany, manana mpihaino tsy mivadika sy tsy mivadika.
Ity ny tranga Cat Phones, orinasa iray manokana amin'ny fanamboarana ny fitaovana matanjaka sy mateza mateza, natao manokana ho an'ireo mpampiasa sahy sy mahavariana indrindra, izay vao nanolotra smartphone roa vaovao, ny Cat S31 sy ny Cat S41.
1 Ireo finday henjana indrindra
2 Ary koa ... Caterpillar T20, ny takelaka ho an'ny mpitsangatsangana
Ireo finday henjana indrindra
Araka ny nomarihin'ilay orinasa, ireo mpampiasa fitaovana Cat dia avy amin'ny sehatra toy ny fiarovana, fambolena, fananganana, mandeha ho azy, na mpampiasa mafana fo amin'ny famoahana adrenaline amin'ny hetsika mampidi-doza sy mampientanentana. Na izany na tsy izany, mpampiasa ireo izay mila finday avo lenta matanjaka, mahatohitra, mahaleo tena ary maharitra, izay atolotry ny orinasa miaraka amin'ny Cat S31 sy Cat S41 vaovao ihany.
Ny vaovao Cat S31 dia ny fanavaozana ny teo alohany, ny Car S30, ary natokana indrindra ho an'ireo mpampiasa "izay mila telefaona matanjaka azon'izy ireo itokisana".
Ny mampiavaka azy indrindra dia a Efijery 4,7 inch miaraka amin'ny fehin-kevitra 720p ary havaozina hampiasaina ety ivelany, na dia amin'ny rantsan-tànana lena aza, ary amin'ny fiarovana Corning Gorilla Glass 3 Bateria 4.000 mAh, 2 GB an'ny RAM, Fitahirizana 16 GB anatiny mivelatra amin'ny alàlan'ny karatra micro SD, Android 7.0 Nougat toy ny rafitra miasa ary a tsy tantera-drano izay mamela ny fanitrihana hatramin'ny 1,2 metatra lalina mandritra ny 35 minitra (fanamarinana IP68).
Ankoatr'izay, ny vaovao Cat S41 Izy io dia aseho ho fanavaozana ny Cat S40 teo aloha ary, tahaka ilay teo aloha, finday avo lenta iray izay miavaka amin'ny azy fanoherana fatratra, hamafisana ary fizakan-tena.
Ny smartphone smartphone Cat S41 vaovao dia misy a Efijery Full HD 5 mirefy miaraka amin'ny fiarovana Corning Gorilla Glass 3 ary nohamarinina hampiasaina any ivelany, na dia lena aza ny tananao.
Ao anatiny no misy a Bateria 5000 mAh izay, raha ny filazan'ny orinasa azy ihany, "dia manome faharetana hatramin'ny 44 andro na hatramin'ny 38 ora fotoana firesahana amin'ny 3G", ka nahatonga azy io ho fitaovana namboarina manokana ho an'ireo izay mandany fotoana be lavitra ny trano sy ny toeram-pivarotana. Ary io dia, ankoatr'izay, manana ny fizarana bateria, izay ahafahanao mameno fitaovana hafa manomboka amin'ny finday avo lenta mankany amin'ny haavo efa nofaritanao mialoha, amin'izay fotoana izay dia hijanona ny famandrihana.
Ny Cat S41 koa dia manana processeur Mediatek valo fotony amin'ny 2,3 GHz miaraka amin'ny Fahatsiarovana RAM 3 GB, Fitahirizana 32 GB afaka manitatra hatramin'ny roa ianao amin'ny alàlan'ny karatra micro SD, ary misy izany Fanamarinana IP68 ho an'ny fanoherana ny vovoka sy ny rano.
Ary amin'ny maha rafitra fiasa azy, dia miaraka amin'ny Android Nougat ho fenitra ihany koa.
Ary koa ... Caterpillar T20, ny takelaka ho an'ny mpitsangatsangana
Miaraka amin'ny Cat S31 sy Cat S41 vaovao, ilay orinasa Telefaona saka namoaka ilay takelaka vaovao ihany koa Caterpillar T20, izay ny marika voalohany alohan'ity sokajy fitaovana ity.
Tahaka ireo teo aloha, takelaka iray io indrindra matanjaka sy mahatohitra, natao ho an'ireo izay "miasa amin'ny toe-javatra sy toerana ilana fitaovana maharitra be."
Anisan'ireo mampiavaka ity takelaka manokana ity:
Rafitra fandidiana Windows 10
Conectividad LTE, Wi-Fi, USB 3.0, Mini HDMI, fivoahan'ny horonantsary, Bluetooth 4.1
fanamarinana IP67 fanoherana ny vovoka sy ny rano
latsaka avy amin'ny 1,8 metatra ny haavony
Porofon-tsiranoka masira sy tsindry mahery vaika, noho izany dia azo ampiasaina amin'ny toe-javatra iasana na toetr'andro.
Batterie 7500 mAh (tsy azo esorina)
Efijery 8 ″ miaraka amin'ny fiarovana Gorilla Glass
8350GHZ Quad Core Intel® Atom Z1,44 Processor
Fitaovana anatiny 64 GB
Raha mila fampahalalana bebe kokoa momba ireo sy ny vokatra Cat Phone hafa ianao, tsidiho ny tranonkalany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » IFA » Cat Phones dia mandefa ny finday avo lenta vaovao mahatohitra tena, Cat S31 ary Cat S41, ao amin'ny IFA 2017
Tiako ity marika ity. Ohatrinona ny vola?
Ity no LG V30 vaovao